Mila “Apartheid” i Japana, Hoy ilay Mpanoratra Mpifikitra Amin’ny Nentin-drazana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Febroary 2015 13:37 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Italiano, Català, Español, English
“Iza marina i Ayako Sono ?” Sary natolotr'i Kikatarou Yamazaki (niainga avy amin'ny olan'i Shukan Kinyobi 24 Jan 2014 )
Tanaty tsanganan-dahatsoratra iray Sankei Shinbun tao anaty gazety vita printy, nanamarika ilay Japoney mpanoratra sady mpikatroka politika avy amin'ny mpifikitra amin'ny nentin-drazana, Ayako Sono, ary niaro fa tokony havahanaamin'ny alàlan'ny fiaviany ary terena honina aminà toerana voatokana ireo mpifindra monina nankao Japana .
Ao anatin'ny resabe misy amin'izao fotoana izao mikasika ny hampitomboana na tsia ny isan'ireo mpifindra monina mankany Japana manoloana ny fihanteran'ny mponina no nosoratan'i Sono ilay lahatsoratra .
Hiroko Tabuchi, solontenan'ny New York Times fahiny tao Japana :
Ilain'i Japana ny miresaka momba ny fanavakavahana (2) lahatsoratr'i Sankei no nitaky indrindra ny hanavahana ireo mpifindra monina, miendrika Apartheid
Raha toa tsy maintsy mamela ireo mpifindra monina ho avy hanampy hanamaivana ny fanatanterahana ireo asa sarotra amin'ny fikarakaràna be antitra i Japana, milaza i Sono ao amin'ilay tsanganan-dahatsorany ho an'ny Sankei, fa mila mamorona fetra apetraky ny lalàna i Japana, fetra izay hamefy mazava tsara ny satan'ireo mpiasa ho toy ny mpifindra monina fa kosa tsy hahafahany haka zom-pirenena.
Notohizany hatrany amin'ny fitanisàna ny rafitra Apartheid fahiny tao Afrika Atsimo ho toy ny ohatra tsara amin'ny karazana politika tahaka izany.
Taorian'ny nanamarihany ny lahatsoratr'i Sono izay niteraka korontana ambony ambany tao anatin'ny aterineto tao Japana, nanapaka hevitra handika manontolo ilay lahatsoratra Sankei voasoratra i Peter Durfee, mpanoratra sady tonian-dahatsoratry ny Nippon.com.
@recordpaul @Karlagollanes ny hany antony voamariko ary nandikako ilay lahatsoratra dia ny isan'ireo fanehoankevitra feno hatezerana avy amin'ny vahoaka Japoney
Avy amin'ilay fandikàn'i Durfee ilay tsanganan-dahatsoratra Sankei Shimbun an'i Ayako Sono :
Hatramin'izay nahalalako ny zava-nisy tany amin'ny Rapoblikan'i Afrika Atsimo, 20 na 30 taona lasa izay, dia resy lahatra aho fa tsara ho an'ny foko tsirairay ny miaina tsy mifangaro, na ho an'ny fotsy io, na ho an'ny Aziatika, sy ny mainty tao amin'izany firenena izany.
Vakio eto ny fandikàna feno natao'ni Peter Durfee an'ilay tsanganan-dahatsoratra Sankei an'i Ayako Sono.
Tsy vaovao amin'ny resabe ao Japana raha i Sono :
@HirokoTabuchi @Durf @jonathan_soble tsy misy ifandraisany amin'ny resaka Sankei, saingy nahita tsy ela akory ny andran-dahasoratra nataon'i Sono momba ny lafiny “tsara” tamin'ny Ady Lehibe Faharoa.
Sangany amin'ireo soratra: “70 taona taorian'ny ady, tsy ampy raha ny toe-po tsy tia ady, mifototra amin'ny resaka ‘maha-olona’ tsotsorina fotsiny, no ho ampitaina ho an'ny taranaka mandimby.
Lohateny vaventy: “Mihoatra lavitra noho ny resaka zava-doza ateraky ny ady, tsy maintsy tadidiantsika koa ny fahendrena amin'ny maha-firenena antsika azo tamin'izany.”
Miavaka ny fanehoankevitr'i Sono momba ny apartheid satria, teraka tamin'ny 1931, izy dia mpanoratra manana ny lazany sady mpikatroka mafana fo avy amin'ireo mpifikitra amin'ny nentin-drazana ao Japana nandritry ny vanim-potoana taorian'ny ady. Nanao ny asan'ny mpanolotsain'ny Praiminisitra Japoney Shinzo Abe izy momba ny fanabeazana, nitàna toerana tao amin'ny filankevi-pitondran'ny Japan Post, ary koa nitàna toerana tao amin'ny filankevi-pitantanan'ny NHK, fampielezampeom-pirenena ao Japana.
Mpanohana ihany koa an'ilay filoha very hasina tao Pero, Alberto Fujimori, i Sono, ary filohan'ilay Nippon Foundation niteraka resabe tany afovoan'ny taona 1990 tany ho any.
Ny olana dia mpikambana ao anatin'ny kaomity miaraka amin'ny praiminisitra momba ny fanavaozana ny fanabeazana i Ayako Sono. Ny governemantan'i Abe dia miantehitra be aminy. Mety ho tsara raha mba hita hoe mifanaraka tsara amin'ny politikan'ny governemanta ve ny fomba fisainany.
Nanontany tena ireo olom-pirenena hafa ny amin'izay tsy maintsy ho eritreretin'i Sono. Nilaza i Takafumi, mpandraharaha misongadina amin'ny resaka tranonkala sady eken-teny ety anaty aterineto hoe :
Somary manidintsidina izay ihany izy any anaty lohany any!
Ny hafa manipika hoe an'ny tery saina ny fanehoankevitra tahaka ireny, indrindra rehefa jerena ny hoe i Tokyo no hampiantrano ny Lalao Olaimpika 2020 :
Ary ao anatin'ny fanomanana ny Lalao Olaimpika ihany koa dia izy no manindrahindra fomba fijery manokana mikasika ny maha-nosy ny firenentsika!
Afrikana Tatsimo iray naneho hevitra no nahatsiaro ho naloiloy tamin'ny teniny :
.@HirokoTabuchi @Durf @Sankei_news his wouldn't even be printed in #SouthAfrica, as it violates our Press Code and incites discrimination. — Deva Lee (@DevaLee) February 12, 2015
Tsy hivoaka printy akory aty #Afrika Atsimo ity, satria manitsakitsaka ny Fitsipiky ny Asa Fanaovana Gazety aty aminay no sady mihantsy fanavakavahana